Fiaraha-miasa : hanampy ny CUA amin’ny fitakina hetra i Frantsa | NewsMada
Fiaraha-miasa : hanampy ny CUA amin’ny fitakina hetra i Frantsa
Noraisin’ny ben’ny Tanànan’Antananarivo, Ravalomanana Lalao, tetsy amin’ny lapan’ny Tanàna Analakely, omaly, ny ambasadaoron’i Frantsa, Vouland-Aneini. Nivoitra tamin’ny dinikasa ny fampananten’i Frantsa handefa manampahaizana sy matihanina hanampy ny tekinisianin’ny kaominina (CUA) amin’ny fitakiana ny hetra ary fanampiana amin’ny fandrindram-piterahana sy ny fikarakarana ny zaza.
Teo koa ny nanaovana tombana ny efa vita eo amin’ny fiaraha-miasa sy ny mbola hatao. Anisan’izany ny fanamboarana ny fotodrafitrasa eny anivon’ny boriborintany, toy ny làlan-kely, trano fidiovana, toerana fanasan-damba, fanitarana ireo trano sekoly, ny fikarakarana sy fanitarana ireo kianja fanatanjahantena ary ireo fotodrafitrasa momba ny fitaterana.
Tsy vitan’izany. Nampanantena handefa manampahaizana sy matihanina hanampy ny teknisianin’ny kaominina (CUA) amin’ny fitakiana ny hetra ary fanampiana amin’ny fandrindram-piterahana sy ny fikarakarana ny zaza ry zareo frantsay.
Hitohy amin’ny fihaonana, afaka iray volana eo, izany, hijerena sy hanarahana maso ny asa vita.